HomeWararka CiyaarahaChelsea oo wadahadalo la furtay daafaca reer Hungary Attila Szala
ISTANBUL, TURKEY - APRIL 25: Attila Szalai (41) of Fenerbahce celebrates after scoring a goal during Turkish Super Lig soccer match between Fenerbahce and Kasimpasa at Ulker Stadium in Istanbul, Turkey on April 25, 2021. (Photo by Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images)
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay sare u qaaday xiisaha ay u qabto daafaca Fenerbahce Attila Szalai .
Blues ayaa rikoor cajiib ah oo dhanka daafaca ah soo bandhigtay waxaana laga dhaliyay kaliya 24 gool 50kii kulan ee ay ciyaartay.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo aan la hubin tiro ciyaartoy ah, kooxda heysata horyaalka Yurub raadineysa bedelka kuwa ka tagaya Kooxda.
Isagoo bartilmaameed u ahaa dhowr toddobaad, Football Insider ayaa ku warameysa in Chelsea ay diyaar u tahay inay qaab joogto ah ula soo wareegto Szalai.
Warbixinta ayaa sheegeysa in wadahadalo ay horey u yeesheen dhinacyada ay khuseyso iyadoo Chelsea la sheegay inay xiisaynayso dhamaystirka heshiiska bisha Janaayo.
Inkastoo 23-sano jirku uu qandaraas kula jiro ilaa 2025, waxaa la soo jeedinayaa in Chelsea ay awood u yeelan doonto inay la heshiiyaan Fenerbahce haddii ay rabaan inay la wareegaan xidigan.